Cydia Impactor: bvisa iyo Jailbreak kubva kune yako kifaa | IPhone nhau
Izvo zvisingawanzoitika zvekuti Saurik inotangisa maficha matsva muCydia zvekuti kana ikadaro inokonzeresa kukanganisa kukuru, uye kana iri zvakare chishandiso chinoshanda zvakanyanya seCydia Impactor saka zvakatonyanya kudaro. Musiki weCydia achangobva kuburitsa mune akati chengetedza chitoro ichi chishandiso chitsva icho inokutendera iwe kubvisa chero chiratidzo cheCydia kubva pane chako chishandiso, Kuisiya iri nyowani kubva kufekitori ine imwecheteyo sisitimu yekushandisa yakaiswa uye pasina kukosha kwekuomesa kudzoreredza kana kugadzirisa maitiro. Tinokupa iwe pazasi pazasi.
1 Nei uchibvisa Cydia?
4 Dzimwe nzira
Nei uchibvisa Cydia?
Zvingaite sezvisinganzwisisike kune vazhinji kuti mumwe munhu anoda kudzima Cydia kubva pane yavo kifaa kana kuti application senge Cydia Impactor yakavhurwa kana uchibatanidza chishandiso chako kuTunes nekudzvanya pakudzorera iwe une zvese zvawakaita. Asi pane zvikonzero zvinoverengeka nei zvichikosha kubatsira.
NaCydia Impactor iwe unozosiya chishandiso chako chakadzoreredzwa, sezvo chakasiya fekitori, pasina chero kuzorora kweCydia, kunyorera kana mushandisi data, asi pasina kushandura vhezheni yeIOS. Dai iwe uine iOS 8.4, iyo imwechete vhezheni ichave iyo yauinayo iwe pakupera kwemaitiro. Ne iTunes iwe unogona kuita zvakafanana, asi gara uchiisa yazvino vhezheni iyo Apple inasaina.
Kuchengeta yazvino vhezheni kunoreva kuti iwe unogona Jailbreak zvakare gare gare. Kana iwe ukavandudza, iwe ungangodaro ucharasikirwa nesarudzo iyoyo.
Zvese zvinoitwa kubva kune chako chishandiso, pasina chikonzero chekubatanidza kune komputa yako. Maitiro ari nyore sekutsikirira bhatani.
iOS 8.3 uye 8.4
Inoenderana nezvose zvishandiso kubvisa iyo iPod Kubata 6G, Izvo zvisina zvidzoreso kuburikidza neOTA izvozvi.
Ita backup yemuchina wako. Ramba uchifunga kuti iwe ucharasa zvese: mapikicha, kunyorera, data ...
Chishandiso chako chinofanira kunge chiri kubhadharisa neinopfuura 20% bhatiri rasara
Kana iwe uine sarudzo yekuwana yangu iPhone inoshanda, ramba uchifunga kuti Iwe unozobvunzwa password yeiyo iCloud account inosanganisirwa nemudziyo mushure mekudzoreredzwa.
Dhawunirodha Cydia Impactor kubva kuCydia.
Dzvanya pa icon yekushandisa iyo ichangobva kuoneka pane yako springboard.
Dzvanya pa "Delete data rese uye unjailbreak kifaa" uye simbisa zvakare muhwindo rinoratidzika.
Usaite chero chinhu neyako kifaa kusvikira maitiro apera.
Kana uchinge wapedza, unofanirwa kuimisa kubva pakutanga, sekunge kuti wainge wabvisa mubhokisi rayo richangotengwa.
Chokwadi kupfuura mumwe wenyu munoziva dzimwe nzira dzakadai ILEX RAT o SemiRestore izvo zvatakatokuratidza pane dzimwe nguva. Kunyangwe icho chinangwa chayo chakafanana, Iyi dzimwe nzira mbiri dzinosiya mudziyo wako neshanduro imwechete yeIOS yawaive nayo asi neCydia yakaiswandiko kuti, kuchengetedza Jailbreak.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » Cydia Impactor: bvisa iyo Jailbreak kubva kune yako kifaa
mushure mekushandisa cydia impactor ndinogona kuita jb zvakare?
Pindura kune mukuru
Ndadzorera iphone 4s ine cydia impactor, ndadzorera backup uye pandinobatanidza iyo iphone uye inobuda zvakare kana ndichida kushandisa iyo iPhone sekunge yaive nyowani kana kana ndichida kudzorera kopi. IPhone, chii ndingaita here?
Ndeipi backup yawakadzorera? Kubva kuICloud?
DIego Valenzuela akadaro
Kana ndikaita izvi ndobva ndaisa backup, ko iyo jailbreak inodzoka here? Ndatenda.
Pindura DIego Valenzuela
Kwete, iwe uchafanirwa kuita jailbreak zvakare
Ipapo ese mafomu angu aizosara asi kana iyo jailbreak, handiti?
Chaizvoizvo, kunyange ini pachezvangu ndisiri kukurudzira kudzoreredza backup yakaitwa neJailbreak pane chishandiso chisina Jailbreak ... inogona kupa mamwe matambudziko ekugadzikana
Mhoro shamwari, yakanaka posvo! Zvese zvakaenda zvinoshamisa! Kusvika pari zvino ndanga ndichida kupaza jailbreak iPhone 4s ine iOS 8.1.
Zvinoitika kuti ini ndinoedza kuita jailbreak nemapangu nevamwe asi kana iri yakanyanya kukwirira vhezheni yacho inondiudza kuti handikwanise, kana iri yakaderera chaizvo inondiudza kuti iTunes yapera yechinyakare kunge iri yazvino! Saka ndinoita sei kuti ndirwisane zvakare?
shamwari bvisa iyo jailbreak neactoractor, ikozvino ndogona kugadzirisa iyo ios? Ndiri pa8.4 uye ini ndoda kuiisa, ndinogona? kana kuti zvichandipa dambudziko?
Pindura kuna Maxmiliano
Victor akachena akadaro
Shamwari, ndiri iOS 9.3.3; ndinogona here kushandisa zvine simba kudzoreredza foni yangu kwayaive isina jailbreak?
Pindura Victor Blanco